बाहुनवाद भर्सेस् बाहुनपाद | जुज्दाइका २ पैसे विचारहरुको सँगालो
बाहुनवाद भर्सेस् बाहुनपाद
Posted on December 10, 2014 by jujumaan
मैले धेरै सोचेँ, के हैच यो बाहुनवाद भनेर।
अरु सबै जनजाति, तर बाहुनहरु (क्षत्रीहरु पनि यही भुङ्ग्रोमा पर्छन) चैँ अलक्क अरे। मान्छे ‘क’ कुनै जातको भएपनि ‘क’ले बाहुनवादी हर्कत देखाउँछ भने ‘क’ पनि बाहुनवादी अरे। ए सितर्नी त, यिनका परिभाषा!
फन्टुस कुरा सुनेपछि उदेकका साथसाथै कौतुहलता त लाग्ने नै भो। आकाशमा उड्ने चरालाई माछावादी, जमीनमा घिस्रने सर्पलाई स्यालवादी भनेजस्तो लाग्यो… रद्दी कुरालाई मेरो दिमागले यसरी नै चित्रित गर्‍यो।
त्यसैले धेरै सोचेँ, कस्ता हुने रहेछन बाहुनवादी भनेर। अनि के रहेछ बाहुनवाद भनेर।
सामन्ती, शोषक, मिचाहा, अतिक्रमण, दमन, पिल्सित, आदि शब्दहरु जायज छन कतिपय ठाउँहरुमा। सबै शब्दहरु सबै ठाउँमा उपयुक्त छैनन्, तर जहाँ अर्थले अवस्था बुझाएका छन, त्यहाँ यिनीहरुको व्याख्या र पुष्ट्याइँ पनि राम्रैसँग नियमसम्मत तरिकाले भएका छन। यिनीबारे बहस र विवाद गर्न चाहन्न।
तर शब्द केलाउने र भिडाउने जसको ‘फुलटायम जब’ हुन्छ, तिनले डेढ-दुई वर्षयता ल्याएको बाहुनवाद शब्द भने किन किन मन परेन। म बाहुन भएर मन नपरेको हैन। अचेल ‘बाहुन/क्षत्री’ र ‘सामन्ती’ लाई पर्यायवाची ठानिन्छ। यो अर्थमा सामन्ती, दमनकारी आदि शब्दहरु पनि मन पर्न नहुने हो। तर बाहुनवाद जतिका खराब अरु शब्दहरु छैनन्। किनभने अरु शब्दहरुले बाहुनदेखि शेर्पा, राई, नेवार, दमाईँ, थारू र अन्य मधेशी सबै, तर खराब विचार र प्रवृत्ति भएकालाई ठाडो रुपमा एक्ल्याउँछन। तर बाहुनवादले बाहुनहरु पहिले एक्ल्याएर मात्र अन्य जातका ‘बाहुनवादी’ – whatever the fuck this word means – हरुलाई घेराभित्र ल्याउँछन।
बाहुनवाद के हो, के होइन, कसरी होइन, कसरी गलत बुझिएको छ, कसरी गलत बुझाइएको छ भनेर लेख्न लागेको भुत्रो पनि हैन। बाहुनवादको व्याख्या आउँदैन, त्यसैले गर्दिनँ। शब्द केलाउने, शब्द केलाएर पैसा खेलाउने अनि सोझासादा भिडाउनेलाई थाहा होला। तर मैले स्कूलमा पढेअनुसार, कुनै शब्दमा ‘वादी’ जोडिँदा जोडिएको शब्दको समर्थन वा उक्त शब्दको अर्थमा मतैक्य गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तो – माओवादी भनेको माओको समर्थन गर्नेहरु; समाजवादी भन्नाले सामाजिक समताको सिद्धान्त समर्थन गर्नेहरु, आदि।
यही ढाँचामा बाहुनवादी भनेको के होला भनेर सोचेँ। हामी नेपाली शब्दकोषको अर्थमा नजाउँ, किनभने टपरटुइयाँहरुले अहिलेको सामाजिक परिवेशमा हेर्दा यो शब्दको अर्थ अर्कै हुन्छ भन्छन। ल ठीक छ, फेरिएकै सही। तर फेरिएको भनेर केलाई भनेको?
क) बाहुन भनेर जजमानी गर्ने जात भनी अर्थ्याइन्छ भने बाहुनवादी भनेर सबैलाई जजमानीका समर्थक भनेर पक्का भनिएको हैन होला!
ख) बाहुन भनेर सिधै:
१. सामन्ती (माथि भनेँ, अचेल पर्यायवाची मानिन्छन यी दुई शब्दहरुलाई) भनेको हो भने,
२. फटाहा, धूर्त, चिप्ले, नाकचुच्चे, ठिस आदि, र अन्य मनलाग्दी विशेषणहरुको उपमा दिन खोजिएको हो भने
… यसो भन्नेहरुलाई भन्न चाहन्छु – गलत बुझ्नुभएको छ तपाईँहरुले। फुलटायम जब शब्द बनाउने तर मान्छे बिगार्ने हुँदा पनि जाबो यो एउटो शब्दको मर्म बुझ्नुहुन्न भने झाँट गरीखानु हुन्च?! आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न नसकेकोमा लाज लाग्नुपर्ने हो तपाईँहरुलाई छि: ! म सिकाइदिन्छु बरु, मेरो क्षेत्र नभए पनि।
मैले धेरै खोजेँ हेर्नुस्, बाहुनवाद के हो भनेर। बहुत रिसर्च गरियो। गाउँ-गाउँ डुलेँ, थुप्रै जनजातिका धेरै मानिसहरु भेटेँ, मेरा करा राखेँ, बुझाइदिनुस् भने, र केहि रोचक तथ्य कुरा फेला परे। म पुस्तकालयहरु पनि धाएँ, मिडियाहरुमा निस्कने खबरहरु पढेँ, सामाजिक सञ्जालका विचार र बहसरु पनि बुझेँ। अनि निचोडमा निस्केँ म।
निचोड यो छ कि बाहुनवाद शब्द गलत रहेछ। सहि रहेछ त बाहुनपाद।
कडा परिश्रमपछि, ज्यादै खानतलासपछि एउटा कथा पत्ता लगाएँ। किंवदन्तीको मूलसार यस्तो रैछ:
कुरा के भने, एउटा गाउँमा आफूलाई उ-‘पाद्दे’ भनी चिनाउने एउटा बाउन बस्दो रैछ। तपाईँको टिपिकल टपरे बाउन: जजमानी गर्दा टपरी घिसार्ने; सिदा दिइएका टपरीमाथि टपरी थपेर ६-७ तला बनाएर ठुस्स गनाउने, हेर्दा मात्र सेतो (खासमा पुरानो धोतीको च्यातेर बनाइएको) रूमालले चार कुना’टी गाँठो पारेर निसङ्कोच ङिच्च पर्दै घरतिर बोकेर लग्ने जन्तु।
यै बाउन एकदिन सराद्दे गराउन गएछ। बाउन मुल्ला लोभी। सराद्देपछि टपरीभरि दही-भात र पीरो आलुको तरकारी खाएछ। ‘भोलि सराद्देमा मस्त घिच्ने हो’ भनेर बेलुका आधापेट सुतेको बाउनको खाली पेटमा दही र पीरोले एकसाथ कार्यक्रम गर्दा उत्पात त हुने नै भो। अनि के भएछ त भन्दा बाउनले मस्त पादेछ!! ठुस्स छोडेछ, कसैले थाहा पाउन्नन् भनेर।
इस् थाहा नपाउनु। पश्चिमतिरको ढोकाबाट आएका पवनदेवको कृपाले अपान रसायनलाई उडाएर चौकासम्मन पुराउँदा त लगभग सबै बेहोस! अनि त्यहाँबाट शुरु भयो यो भनाइ – बाहुनको जातभन्दा बाहुनको पाद बहुतै हरामी। अर्थातः बाहुनपाद > बाहुनजात।
कतिले त के पनि थपे (thesis को axiom जसरी बुझौँ) भने त भन्दा, बाहुन कतै पुगेमा भनिन्थ्यो कि बाहुन आउनुभन्दा २ घण्टाअगाडि उसको पाद (पाइला) आइपुग्छन। अनि बाहुनका पाइलाले टेकेका ठाउँहरुलाई पनि बाहुनपाद भनियो। बाहुनको पादले बाहुनको काम जनाउँछ, बाहुनको पादले बाहुनको जात जनाउँछ भन्न थाले।
त्यहाँउप्रान्त बाहुनपादले समाजमा जरा गाडेको छ। माड नपुगेको ठाउँमा पनि बाहुनपाद पुगेको छ। जबरजस्ती बाहुनपादले वातावरण दूषित पारेको छ। त्यसैले बाहुनवादबाट माथि उठौँ साथीहरु, बाहुनपाद आएको छ बजारमा। हामी बसेको ठाउँ दुषित पार्ने बाहुनपादको डटेर सामना गरौँ।
अल्सो, बाइ एक्स्ट्रापोलेशन अफ द किंवदन्ती, अतिवाद पनि खासमा अतिवाद नभएर अतिपाद हो! ज्यादै नै पादेपछि जसरी अतिपाद हुन्च, उसैगरी बाहुनले पादेको पनि बाहुनपाद हुन्च। यति फिस्टे कुरा बुझ्न नसकेर देशका धुरन्धर विद्वानहरु लन्ठङलन्ठङ हल्ली बस्या छन। अनि कसरी हुन्च संविधानको निर्माण?? कसरी हुन्च देश विकास?? 😉
तर धेरै बुझ्नेले बाहुनपादलाई बाहुनवाद भनिदिए। र यसरी अजासु सोल्टीहरुले नभएको कामको नहुने नाम जुराइदिए — भन्ने कुराको साक्षी इतिहास छ।
कुरामा कुरा थप्दाः पाद्नेले पादिसक्यो। पाद्ने बेलामा वरपरकालाई गन्हायो पक्कै। आफूलाई पो गन्हाउँदैन त आफूले पादेको पाद। नभएको पाद आफैँ सिर्जना गर्ने, सुँघाइको अम्मल हुर्काउने, अरूलाई पनि सुँघ भन्ने, र सुँघ्न लगाउनेको जगजगी छ। पाद्ने फटाहा कि मिथ्या पाद बाँड्ने धूर्त?
रमाइलो के भने पादेको कुनै सबुतप्रमाण बाँकी नरहँदा पनि सुँघ्नेले पादको स्वाद भुलेका छैनन्। तिर्सना उत्तिकै छ। र त खोज्दै हिँड्छन बाहुनपाद। भेट्दैनन्। भेट्छन त बाहुनजात। आफ्नो जात र चिनारीको पेशा त बाहुनहरुले फाल्न थालिसके भने, नपादेको पाद कसरी भेट्लान?? तर स्वाद बसेकालाई अब नभई हुँदैन। नभएपछि जबरजस्ती उत्पति गराउँछन।
प्रकृतिले नदिने र प्रकृतिमा अब हुन नसक्ने तत्वको निर्माण जबरजस्ती गराउँदा परिणाम के हुन्च भनेर जुरासिक पार्क घुम्न गएकाहरुको हविगतबाट सिक्नुपर्ने हो। बसपार्क त मुश्किलले देख्नेहरुले जुरासिक पार्क के हेरेका होलान? त्यसैले, लिँडे अज्ञानतामा त्यस्ता कुराहरुको जबरजस्ती उत्पति गराउँछन मानिस। र कति भन्छन – ‘अझ पनि बाँकी छ बाहुनपाद! यी, छ र त म दिनदिनै सुँघ्छु। पत्याइनस्? यी तँ पनि सुँघ् त!’
हनुमानहरु सुँघ्छन पनि।
भन्छन – बाहुनवाद देशमा हावी छ।
म भन्छु – बाहुनपादको हावा देशमा पक्का छ।
भन्छन – बाहुनवाद सबै दिशामा भेट्न सकिन्छ।
म – अँ, बाहुनपाद सबै दिसामा चैँ भेट्न सकिएला। 😀
← घरको नबुझेको पीडा
संविधान र किसान →
2 thoughts on “बाहुनवाद भर्सेस् बाहुनपाद”
Fucking funny, bahun baje.